Noma yibaphi abasebenzisi ucishe asebenzayo Inthanethi kumanethiwekhi jikelele kanye wezimboni ezizimele ukuthi usilekelele, wezwa izwi "Ava". Kodwa nakhu inkinga: ukuthi kusho nalokho ibadla, akekho uchaza. Empeleni, konke silula, futhi isihloko uzothola ukuthi ABA e VC, "Facebook" noma ezinye ukuxhumana nomphakathi, kanye ezithangamini ezehlukene kanye namanye amasayithi ezidinga ukubhalisa.
Ava - kuyinto segama "Avatar", abenyukela abasebenzisi kalula zokuxhumana. Lesi sithombe, okuyinto lokhu noma lowo muntu. Lena real "ubuso" ozungezayo abantu khumbula, okuyinto kuthambekele okuyinto abakujwayele. Ngo ukuxhumana nomphakathi, ukujola amasayithi kanye amanye amasayithi ucishe sina futhi ibhizinisi njengoba abalingiswa esetshenziswa isithombe wangempela umsebenzisi ababhalisiwe. Hhayi ngaso sonke isikhathi, of course, ngoba ngokuvamile akukho lutho ephumula ukubeka VC uphawu, isibonelo, noma uhlamvu okuthandayo kusuka ibhayisikobho noma umdlalo. Kodwa iningi labantu uncamela ukukhombisa ubuso bakhe beqiniso phambi nezwe virtual.
Ekuqaleni kwalesi sihloko, sibuzile lokho ABA e "Oxhumene", "Facebook", njalo njalo. D. Lezi imishwana kukhona impendulo yombuzo othi mayelana esikhundleni ukusetshenziswa izithombe ezinjalo. Ayikho ingosi yokuxhumana nabantu hhayi ngaphandle ama-avatar, bonke abasebenzisi 98% amacala azilungiselele ekhasini lasekhaya isithombe esithile. Sizokwenza ungaxoxi eceleni lokho Ava e "Odnoklassniki" noma kwi lelo, ngoba umnyombo ikhona yonke indawo efanayo, incazelo engashintshwa kuncike ukushintshashintsha ukusetshenziswa kwalo.
Ukusho kafushane, le Ava samanje:
ku ukuphola sites;
kumasayithi nge yokubhalisa, lapho esikhathini esizayo kunezinyathelo asebenzayo ngumsebenzisi bebheke zokuxhumana.
Thanda eziningi izindawo, bonke bangabafowabo izinkomba ezahlukene, futhi esihlanganisa ukuba khona kwabo abalingiswa. E. Uma isayithi inikezelwe umuntu hhayi kuphela atholakala emakhasini alo, kodwa okungenani ngezikhathi ezithile ukukhulumisana nabanye ngokusebenzisa imibono (njengoba inketho), kulapho ngokuvamile abantu azilungiselele avatar.
Avatar ngokuvamile hhayi:
kumasayithi ukusekela umsebenzisi igama;
kumasayithi ne yokubhaliswa, ngeke sihlinzekela isenzo esithile esikhethekile ngumsebenzisi bebheke zokuxhumana.
Kukangaki simkhumbula kubuzwa lo mbuzo "kungani" ... Ngokwesibonelo, Av. Kungani uyidinga, lapho ezimweni eziningi umuntu angakwenza ngokuphephile ngaphandle kwalo?
Yebo, ungafaki isithombe Kungenzeka, ngoba ngokuvamile akuyona imfuneko yokubhalisa esikhathini esizayo. Nokho, lokhu Kunconywa, uma kuphela ngoba abanye abantu babe nomphakathi othuthuke kangcono inkumbulo ezibukwayo, ngenxa yalokho abasuke ukukhumbula abantu hhayi ngegama (nakuba igama Yebo, bangafundza), okungukuthi ngesikhathi izithombe abalingiswa. Futhi ukungabi yawo, izinto ezibonwayo ube nezikhathi ezinzima, njengoba amashumi ngabanye ne isithombe efanayo, nakuba amagama ehlukene, kuba sengathi ngoba umuntu ovamile kubantu ofanayo izingubo nge bakhathale phezu amaphakethe ikhanda lapho izinhlamvu kuphela abhalwe.
Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi ufuna ukwazi ukuthi kubukeka kanjani nomuntu onjani bekhulumisana. Ngokuvamile lisho zokuxhumana kanye ukuphola sites, lapho lo mkhuba ezivamile ungacimi phezu avatar izinhlamvu, izilwane noma izitshalo, okungukuthi yena.
Sesivele esiphethweni lokho ABA, luhlala ukuthola ncamashí ukuhlelwa, indlela yokukwenza, ongakusebenzisa njengoba intandokazi, uma ukukhanya kuyinto ukubukeka lwangempela aluyona ofiseleka kakhulu. Cabangela ezinye izinketho ethandwa kakhulu.
1. Animal. I-intanethi (ikakhulukazi BK) iyona amakati ezivamile. Nokho, ungakwazi abeke yisiphi lidumile yesilwane okwakungenzeka uma ebonakala wena uqobo. Othile ubeka izingonyama ngoba bayaziqhenya, izilo skittish, abanye amahlosi, ngoba izilwane ezidla ezinye eyingozi, abanye nezimpisi, ngoba ungashadile, ezinye izinyoni, ngoba kukhona cute, nokunye .. Yiqiniso ngaso sonke isikhathi isilwane phezu avatar nje ukuthi. Ngokuvamile abantu ukukhetha isilwane / inyoni / inhlanzi / dragon ngoba uhlamvu abawuthandayo, noma njengawo isithombe.
2. Izıthwebulo. Okunye ama-avatar ezivamile - abantu. Ngokuvamile osaziwayo. umlingisi Izintandokazi noma actress, umculi noma umculi, a football player abadumile, umongameli noma abantu nje odumile ku-intanethi. Akubalulekile ngakho ngubani, inqobo nje uma lowo muntu ngesikhathi okungenani eyaziwa ucishe. Kwesinye isikhathi abantu (ngokuvamile abesifazane) wagqoka avatar of usaziwayo, kodwa nje libukeka ngezithombe ezinhle imodeli womuntu, isibonelo.
3. Isimilo imidlalo zakho ozithandayo. Abantu bathanda imidlalo ye-computer, ngakho icala lapha nalokho esithombeni ngezansi. uhlamvu Izintandokazi kusuka ithoyizi ngezikhathi kwenzeka kuzo zombili abadlali nabantu abavamile.
4. An yendaba ezithakazelisayo. Akunjalo ngempela ukuthi ngenkathi equkethwe ngumphefumulo ophilayo, + njengasosukwini lokungivivinya izimo ezichazwe ngenhla. Lokhu kungase kube okungenani yensimbi. Into esemqoka lapho ukhetha abalingiswa - ukuthi uyazithanda umsebenzisi. Abantu amalebula, izakhiwo ezithakazelisayo noma izindawo, izinto ezinhle eziyinqaba, izithombe nokuningi.
5. Isithombe ithumba okushiwo noma ukuma kwenhliziyo. Abantu njalo is sad, scary, kubi, kumnandi, injabulo ... Ngaphansi imizwelo, ungathola isithombe ofanele, ngoba hhayi kuphela labo abazokwazi izithonjana ukudlulisela imizwa yomuntu. Umoya ehloselwe uhlamvu. Ungabuyela into yokuqala.
6. izithombe Private. Naphezu kwakho konke, kuba njalo ukhetho best yimuphi abalingiswa. Okungenani, uma kungukuthi uzokuba troll noma ezinye izinkinga, ukuthi unganaki kakhulu umlingisi kwakhe kwangempela lutho. Ngaphezu kwalokho, ezinye engathandi ukukhombisa ubuso kweqiniso, wesaba ukuthi aqaphele ajwayelekile. Akuwona wonke umuntu ufuna ukudalula izithakazelo zabo phambi Abantu abazi kubo. Nokho, kuyinto isithombe somuntu siqu njalo kubhekwe okungcono Ava (okungenani e ukuxhumana nomphakathi). By the way, kunalokho isithombe ngaphezulu yokuqala, ngcono.
Yilokho. Manje ngoba sewuyazi ukuthi lokho Ava, kungani idingeka, lapho futhi kanjani ukusebenzisa ingakhethwa. ukubukeka Okuningi edideka at igama elingajwayelekile Ongekho ngasohlangothini lwakho, ngawo siyanihalalisela.
SSID yenethiwekhi ye: kunjalo nje, futhi kungani udinga le ndlela?
Ngazi kanjani le ndoda laykaet "Vkontakte": isitatimende
Kuncono inethiwekhi yokusungula ngaphansi kwezimo zamanje
Indlela ubhalise "Twitter"? Imiyalelo kanjani ubhalise "Twitter"
Isiqophi adaptha NVIDIA GeForce GT 440: Ukucaciswa, ukuqhathanisa kanye izimbangi kanti lesi ukubukwa nabanikazi
Hammam-Rich syndrome: incazelo
Funda mayelana namamililitha eziningi kanjani isipuni
Foot Cream nge urea
Iyini iyunithi yokuthungela futhi yini ehloselwe yona?
Imvubu Miniature noma Bald ingulube Guinea
Incazelo uJobe "Umdayisi imikhiqizo ukudla": isampula